Shikii EPRDF Oo Guul Kusoo Gabagaboobay Iyo Caano Kadhan Addis Ababa. - Cakaara News
Shikii EPRDF Oo Guul Kusoo Gabagaboobay Iyo Caano Kadhan Addis Ababa.
Addis Ababa(CN) Isniin.April.06.2015, Waxaa muddo 3 cisho ah kasocday madasha shirarka ee xafiiska raysal wasaaraha shirkii golaha dhexe ee EPRDF oo lagu qiimanayay waxqaadkii ururka EPRDF iyo xukuumada ee 6dii bilood ee lasoo dhaafay. Shirkaas oo xooga saarayay horumarka, nabadgaliyada, arimaha xisbiga, geedi socodka doorashada, arimaha siyaasada iyo qiimaynta siduu u qabsoomay qorshihii koobaad ee isbadalka iyo koboca dhaqaalaha ee shanta sano (GTP-1).
Shirkan oo socday muddadaas sadexda cisho ah habeenkiina lagu daahayay ayaa caawa makhribnimadii kusoo gabagaboobay jawi aad u wanaagsan oo heer sare ah. Shirkan oo ay hogaaminayeen madax bisayl siyaasadeed iyo aqoonba leh oo ugu horeeyo raysal wasaaraha DFI mudane Hailemariam Desalegn oo ah gudoomiyaha ururka EPRDF.
Iyadoo qodob-qodob looga dooday loogana wada hadlay ajendayaashii guriga horyaalay ayaa qiimayn dheer kadib laxaqiijiyay in isbadal laga gaadhay dhanka horumarka gaar ahaan waxsoosaarka beeraha, waxbarashada, caafimaada, biyaha, GTP-1, iyo guud ahaanba isbadalka uu dalku.
Qiimayntan ayaa la isla meel dhigay tiirashii sababta u ahaa guulahaas dhanka horumarka ee dalka waxaana la isla falanqeeyay waxyaabaha u baahan in la iska kabo iyo waxyaabaha dhanka adag iyo dhanka jilicsan ee u baahan in lasii xoojiyo. Sidoo kale waxaa laga hadlay xaaladaha nabadgaliyada, dhaq-dhqaaqa nabad-diidka iyo siyaasada dibada ee wadanka.
Mar uu raysawazaaraha DFI mudane Hailemariam Desalegn uu kahadlayay arimaha doorashada ayuu sheegay in ururka EPRDF looga baahanyahay in ay hormuud u noqdaan hirgalinta sidii doorashada 5aad ee dalka kusoo food leh ay noqoto mid nabadgaliyo iyo cadaalad ku dhamaata.
Marka aan u nimaadno DDSI, warbixinta EPRDF (Official report of EPRDF) ayaa waxay si cad u dhigtay in DDSI ay natiijo dhab ah qorshyaashii horumarineed iyo nabadgaliyo islamarkaana ay keeneen oo ay layimaadeen xirfado iyo xeelado si dag dag ah loogu gaadhay horumar.
Waxaa kaloo ay warbixintu si cad hoosta uga xariiqday in go'aamadii uu gaadhay XDSHSI ee shirwaynihii 8aad iyo siduu kuxaliyay khilaafaadkii hogaaminta inuu ahaa go'aan sax ah oo faaido u lahaa sii xoojinta iyo taabo galinta natiijooyinkii laga gaadhay horumarka iyo nabadgaliyada, islamarkaana uu abuuray guulo dar dar galiyay geedi socodkii horumarineed ee DDSI, iyadoo wadada lagu adkayn karo guulahan ay tahay sii xoojinta nidaamka xisbinimo, dimuqraadi, iyo nidaamka haayad kushaqaynta. (Caano Kadhan Ubo fii Ubo, SSI fii Daalac wa caga mardafiya).
Warbixinta ayaa sidoo kale waxaa lagu amaanay XDSHSI go'aanka uu kaga dhigay saamiga musharixiinta ee dumarka boqolkiiba 58 heer fedraal halka uu heer deegaana go'aamiyay boqolkiiba 40, iyadoo guud ahaan musharixiinta heer deegaan ay dhanyihiin 273 musharixiin. Dhanka kale waxaa iyadana warbixinta ku cadayd guulaha laga gaadhay xidhiidhka dadwaynaha ee dal iyo dibad. Waxaana shirka gudihiisa iyo dibadiisaba hadheeyay oo sheeko reeb noqotay iyadoo ay shaqsi shaqsi iyo koox koox ay masuuliyiinta EPRDF u hadal hayeen Caano Kadhan iyo Minneapolis.
Cidkasta oo shirka kujirtay ama lasocotay warbaahinta gaar ahaan TV qaranka ayaa qirtay awooda ay DDSI kuleedahay dibada, taasoo lagu ogaaday Shirkii Minneapolis oo ahaa kii ugu horeeyay ee ay masuuliyiin Itoobiyaan ah kuqabtaan cariga maraykanka ee ay codsadaan inay kahadlaan labada xisbi ee Maraykanka kan talada haya iyo ka mucaaradkaba (Democrats and Republican).
Gabagabadii waxaa uu raysalwasaare Hailemariam Desalegn u hagayay shirkan si ay kudheehantahay bisayl siyaasadeed, aqoon, iyo mid kartiba taasoo ay hogaaminta EPRDF caado u leedahay maadaama ay yihiin urur shacab. Sidoo kale waxaa R/wasaaraha garabkiisa midig fadhiyay R/wazaare kuxigeenka ahna gudoomiye kuxigeenka ururka EPRDF mudane Damaqe Mokonin oo sida khaaska ah u maamula xafiiska xarunta dhexe ee EPRDF.
Iskusoo wada duuboo shirkan ayaa wuxuu kudhamaaday jawi aad u wanaagsan oo farxad ay kamuuqatay guriga kadib hadalkii ugu danbeeyay ee Raysal wasaaruhu kusoo xidhay shirka , ayaa waxaa kor u kacay hogaamintii EPRDF oo isku daray sacab iyo gacmo isqabsi kuna dhawaaqay waxaan hirgalinaynaa qorshaha GTP-2. Iyadoo ay xubnaha hogaamintu shirkan kasoo qaateen go'aamo dar dar galin doono hawlihii shaqo ee dalka kuwaasoo ku aadan dadaalka uu wadanku ugu jiro kamid noqoshada wadamada uu dhaqaalahoodu dhex dhexaadka yahay.